VaTsvangirai Vorumbidzwa Sezvo Vairwira Kodzero dzeMunhu Wese
Vamwe vanhu vanoti vacharangarira mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, semunhu akarwa hondo huru mukuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Sachigaro wesangano reCommerical Workers Union of Zimbabwe, Amai Grace Mathe, vanoti vakatanga kuziva VaTsvangirai mushure mekunge vapinda mubazi reZimbabwe Congress of Trade Unions raizivikanwa richinzi Women’s Advisory Council.
Vati VaTsvangirai vakatsigira madzimai kuti vave neboka ravo rakazvimirira pasi peZCTU izvo vati zvakabatsira kusimudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevashandi vechidzimai.
Munyori mukuru weZCTU Women’s Committee, Amai Barbara Tanyanyiwa, vatiwo VaTsvangirai vakaita basa guru, kwete mukurwira kodzero dzevashandi chete, asi mukurwira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Mutungamiri wesangano re This Constitution Our Constitution, Muzvare Abigale Mupambi, vati VaTsvangirai vanofanirwa kurangarirwa semunhu akaenderera mberi nekurwa hondo yekuti veruzhinji vawane kodzero dzakasiyana-siyana mushure mekunge nyika yawana rusununguko.
Murongi wemabasa musangano reNational Mine Workers Union, VaCotten Ndlovu, vati vashandi varasikirwa zvikuru nemunhu akazvipira kwenguva yakareba muhupenyu hwake hwose kurwira kodzero dzevanhu.
Sachigaro webato reMDC T mudunhu reMatabeleland North, Amai Betty Twala, vati vanonzwa kurwadziwa zvikuru nekushaya kwaVaTsvangirai vachitiwo munhu aiva nemutsa aigara achida kubatsira vanhukadzi kusanganisira shirikadzi nenherera kuti vabude mumatambudziko akasiyana-siyana avanosangana nawo muhupenyu.